Fan ny fandresena hatrany lalao? Manana ny tsara indrindra hatrany Win lalao ho anao. Cash Buster Towers avy amin'ny IWG lalao rindrambaiko mpandraharaha dia feno ny sasany tena mahaliana endri-javatra. Ny rehetra momba ny nihodidina ny reels sy handringana ny andian-tsoratra eo amin'ny tilikambo. Misy tena tsara tarehy loko nampiasaina tamin'ny nanaovany ny interface tsara io lalao. Izany no mpandimby ny tany am-boalohany Buster Cash lalao. izany tsara indrindra hatrany fandresena lalao manana vola lokan'ny ny hatramin'ny 1.000.000 £. Misy ny sasany ihany koa ny lalao tombony mahagaga nomena ny mpilalao. Ny fototra toy ny mozika dia Mahafinaritra tahaka ny fijery ny mahagaga io lalao.
Cash Buster Towers Features tsara indrindra hatrany Win lalao
izany Instant tsara indrindra Win Game Tena mahaliana ny sasany dia manana endri-javatra ary tsy sarotra mihitsy ny hahatakatra. Ny rehetra izany manodidina ny tilikambo ny biriky miloko samy hafa izay hatao busted foana isaky ny kofehy ireny. Misy fomba roa samy hafa ny milalao. Ny lamba fanakonana ny kofehy ireny dia manana ny bokotra sy ny isan'ny spins eo amin'ny ankaviany-tanana ilany ny pejy. Eo afovoan'ny, misy ny vato amin'ny tsirairay amin'izy ireo manana ny habetsaky ny loka voalaza eo ambony ireo. Ary tamin'ny lafiny ankavanana-tanana no latabatra izay mampiseho ny isan'ny kintana voaangona sy zana-tsipìka. Afaka manitsy ny filokana amin'ny fipihana eo amin'ny + ary – bokotra teo amin'ny efijery.
Ankoatra izany, the slot offers some special symbols as well. Ny fiainana ny harena famantarana dia iray amin'izy ireo, ary izany dia antsoina hoe mariky ny bibidia ny slot lalao. Mety misy fandresena maro ny 2x sy ny solon'ireo zavatra rehetra, afa-tsy ny marika aelezo ny planeta. Ny aelezo mariky ny slot dia stacked nandritra ny reels.
Instant tsara indrindra Win Gameplay
Ny gameplay ity Instant tsara indrindra Win Game dia be noho ny toa tsotra. Ny tokony atao dia ny mihodina ny reels sy ny isa izay hita eo amin'ny reels handringana ny isan'ny biriky avy amin'ny tilikambo. Tsy ara-dalàna Play and Avereno Play lalao fomba. Ao amin'ny fomba ara-dalàna kilalao, omena anao 5 spins isaky ny loka sy ny isany avy 1-6 no aseho ao amin'ny fitehirizan-taratasy eto ambany ny tilikambo. Misy zavatra telo marika manokana; kintana, faribolana sy ny zana-tsipìka mariky. Raha mahazo 4-kintana fanehoana an'ohatra, Izy io dia mampiasa ny kintana tombony lalao. Ny zana-tsipìka marika refills ny andian-tsoratra tilikambo manontolo indray mandeha indray, ary raha manangona 4 ireo, zana-tsipìka tombony lalao niteraka. Ny faribolana marika foana ny mameno ny fizarana eo amin'ny latabatra boribory tombony.
Raha toa ka tsy nahazo na inona na inona amin'ny fomba ara-dalàna Play dia homena maimaim-poana amin'ny kofehy ireny ny farany dia ho antsoina hoe avereno kilalao endri-javatra. Tamin'izany ny reels kofehy ireny no haneho izany zavatra toy ny kilalao ara-dalàna endri-javatra; i-6 isa, ny kintana mariky, marika na ny zana-tsipìka marika na boribory no haharavany loka vola.
izany Instant tsara indrindra Win Game manana ny sasany tena mahagaga sary sy ny feo fototra nahasarika. Ny gameplay Tena mahaliana, ary azo antoka fa hitandrina ny mpilalao azon'ilay olona nandritra ny fotoana ela. Ny tombony dia toy ny fanehoana an'ohatra fomba hanao vola fanampiny ny sasany afa-tsy ny winnings ny fototra lalao.